Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 4) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-02 mpandimby ny Magazine > Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 4)
Tao anatin'ilay fizarana farany dia nijerena ny haben'ny fampanantenan'ny fanjakan'Andriamanitra ho feno amin'ny fahafenoany no ahafahana manangana loharanom-panantenana lehibe ho anay mpino. Amin'ity lahatsoratra ity, dia maniry ny hidirantsika lalindalina kokoa amin'ny fomba hijoroantsika amin'izany fanantenana izany ianao.
Inona no tsapantsika momba ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy?
Ahoana no tokony hahatakarantsika mpino ny fifandraisantsika amin’ny fanjakana izay lazain’ny Baiboly fa efa misy, nefa mbola ho avy? Ny tiako holazaina dia afaka mampiasa an'i Karl Barth, TF Torrance ary George Ladd isika (azo lazaina koa ny hafa amin'izao fotoana izao) mba hamaritana izany toy izao: vonjimaika ary voafetra ny fotoana. Rehefa mahita ny fanjakan’Andriamanitra isika amin’izao fotoana izao ary maneho izany amin’ny asa ataontsika izay manompo amin’ny fanompoan’i Jesosy mitohy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, dia mijoro ho vavolombelona amim-pahatsorana ny amin’izay mety ho endriky ny ho avy. Ny vavolombelona dia tsy mijoro ho vavolombelona ho an'ny tenany ihany, fa manambara zavatra izay efa fantany manokana. Toy izany koa, ny famantarana dia tsy manondro ny tenany, fa amin'ny zavatra hafa sy manan-danja kokoa. Amin’ny maha-Kristianina antsika dia mijoro ho vavolombelona ny amin’izay lazaina – ny fanjakan’Andriamanitra ho avy. Tena zava-dehibe àry ny fitoriantsika, nefa misy fetrany. Tsy ahitana ny fahamarinany sy ny zava-misy rehetra ao aminy, ary tsy azo atao akory izany. Ny ataontsika dia tsy afaka manambara tanteraka ny fanjakan’i Kristy, izay mbola miafina amin’ny ankapobeny, amin’ny fahatanterahany rehetra. Raha ny marina, ny tenintsika sy ny ataontsika dia afaka manamaizina ny lafiny sasany amin’ilay fanjakana sady manantitrantitra ny hafa. Amin'ny tranga ratsy indrindra, ny fijoroana vavolombelona isan-karazany ataontsika dia mety ho toa tsy mifanaraka tanteraka, ary mifanipaka mihitsy aza. Mety tsy ho vitantsika ny hitondra vahaolana feno amin’ny olana rehetra, na manao ahoana na manao ahoana ny fahatsoram-po, ny fanoloran-tena, na ny fahaizantsika manao izany. Amin'ny toe-javatra sasany, ny safidy tsirairay aseho dia mety tsy azo ihodivirana ho mahasoa sy tsy mahasoa. Eo amin’ny tontolo feno fahotana, dia tsy azo atao foana koa ny vahaolana tonga lafatra ho an’ny fiangonana. Ary noho izany ny fijoroana ho vavolombelona ananany dia tsy ho feno afa-tsy amin'izao fotoana izao.
Faharoa, ny fijoroana ho vavolombelona ananantsika dia tsy manome antsika afa-tsy fomba fijery voafetra momba ny ho avy, izay tsy manome antsika afa-tsy ny fahitana ny fanjakan’ Andriamanitra ho avy. Na izany aza, amin'izao zava-misy rehetra izao dia tsy takatry ny saintsika izany amin'izao fotoana izao. “sary tsy mazava” ihany no hitantsika (1. Korintiana 13,12; Baiboly Vaovao Tsara). Izany no tokony ho takatra rehefa miresaka momba ny fomba fijery “voalohany” isika. Fahatelo, voafetra ny fotoana ny fitoriantsika. Tonga sy mandeha ny asa. Mety haharitra ela kokoa noho ny hafa ny zavatra sasany atao amin’ny anaran’i Kristy. Ny sasany amin’ireo zavatra ijoroantsika ho vavolombelona amin’ny ataontsika dia mety ho vetivety ihany fa tsy maharitra. Raha raisina ho famantarana anefa, ny fijoroana ho vavolombelona ataontsika dia tsy voatery ho manan-kery indray mandeha sy ho an’ny rehetra vao afaka manondro izay tena maharitra, dia ny fitondran’Andriamanitra mandrakizay amin’ny alalan’i Kristy ao amin’ny Fanahy Masina. , lavitr'ezaka na tsy azo ivalozana, na dia manan-danja tokoa aza, dia tena ilaina tokoa, satria mahazo izany lanja izany avy amin'ny fifandraisana amin'ny zava-misy ho avy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Roa diso ny fomba manahirana momba ilay olana saro-pantarina izay efa nisy nefa mbola tsy vita. Ny sasany dia mety hanontany hoe: "Ary inona ny zava-niainantsika sy ny fijoroantsika ho vavolombelona ankehitriny raha tsy mikendry ny hanana azy ireo izy ireo? Koa maninona ary misedra azy? Inona no soa horaisiny? Raha tsy mahavita mamokatra ilay filamatra isika, nahoana isika no tokony hampiasa vola be amin'ny tetikasa toy izany na handany vola be amin'izany? ”Ny hafa kosa mety hamaly hoe:" Tsy ho nantsoin'Andriamanitra izahay, raha kely kokoa noho izany Fanatrarana izay mety sy mamita zavatra tonga lafatra. Miaraka amin'ny fanampiany, afaka miasa tsy tapaka isika amin'ny fanatanterahana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. ”Ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana, ny fanehoan-kevitra momba ilay olana saro-panjakan'ny fanjakana" efa misy nefa mbola tsy vita "dia ny valiny dia maro ny valiny mitovy amin'ireo voalaza etsy ambony. novokarina. Na dia eo aza ny fampitandremana tsy tapaka momba ireo fomba roa ireo, izay noheveriny ho fahadisoana lehibe. Amin'ny fomba ofisialy dia misy ny firesahan'ny triumphalism sy ny fampanginan-tena.
Ny sasany tsy tia mihena amin'ny fahatsapana sy ny fahatanterahan'ny famantarana dia manery ny hanorina ny Fanjakan'Andriamanitra ihany, na eo aza ny fanampian'Andriamanitra. Ohatra, tsy azon'izy ireo esorina amin'ny hoe mety "mpivadika tontolo" tokoa isika. Hitranga izany raha toa ka ampy ny olona nanolo-tena tamin'ny anton'i Kristy ary vonona ny handoa ny vidiny ilaina. Ka raha olona kely fotsiny no nanandrana tamim-paharetana sy tamim-pahatsorana ary nahalala bebe kokoa momba ny fomba sy ny fomba mety, dia hiova bebe kokoa hatrany ny fanjakan'Andriamanitra lavorary ny tontolontsika. Hiverina i Kristy rehefa nandroso tsikelikely ny fanjakana mankany amin'ny fanatanterahana amin'ny alàlan'ny ezaka ataontsika. Mazava ho azy fa ny zava-drehetra izany dia tsy ho vita raha tsy amin'ny fanampian'Andriamanitra.
Na dia tsy ambara ampahibemaso aza, ity fomba fijerin'ny fanjakan'Andriamanitra ity dia manaporofo fa ny zava-bitantsika dia nohon'ny mety ho nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny alàlan'ny asany eto an-tany sy ny fampianarany, fa tsy tena nampihatra izany. Kristy dia nandresy tamin'ny endrika izay ahafahantsika manararaotra na mahatsapa ny mety ho vitany.
Ny valintenin'ilay mpandresy dia manasongadina ireo ezaka izay mampanantena fa hitondra fiovana eo amin'ny sehatry ny fahamarinana ara-tsosialy sy ny fitsipi-pitondran-tena, ary koa ny fifandraisana manokana sy ny fitondran-tena. Ny famerenana ny Kristiana amin'ny fandaharan'asa toy izany dia mifototra amin'ny hoe miankina amintsika amin'ny toerana iray Andriamanitra. Efa mitady "mahery fo" izy fotsiny. Nomeny antsika ny môdelin'ny mialoha, ny drafitry ny fanjakany, ary izao dia efa eo ampitan'ny Fiangonana ny fanatanterahana izany. Nomena antsika hahay hahatsapa ny efa tonga lafatra. Hahomby izany raha resy lahatra fotsiny isika fa izany no zava-misy ary tena mijoro marina tokoa aorian'ny fisehoan'Andriamanitra fa tena mankasitraka azy isika amin'ny zavatra rehetra nataony mba hahatratrarana ny idealy. Noho izany, azontsika atao ny manakatona ny elanelan'ny "tena" sy ny toetran'Andriamanitra - koa avelao handeha haingana isika!
Ny fampiroboroboana ny fandaharan'asan'ny mpandresy dia matetika no ateraky ny fanakianana manaraka: Ny antony dia ny tsy fisian'ny tsy mpino ao amin'ny fandaharana ary tsy tonga kristiana na manaraka an'i Kristy. Ary ankoatra izany, ny fiangonana dia tsy manao izay hahatonga ny fanjakana ho zava-misy ka hanome toerana ho an'ny fiainan'Andriamanitra amin'ny fahatanterahana eto sy ankehitriny. Mbola lavitra kokoa ny tohan-kevitra: be dia be ny Kristianina voatonona anarana (amin'ny anarany ihany) sy ny tena mpihatsaravelatsihy ao amin'ny fiangonana izay tsy tia sy miezaka ny ho amin'ny fahamarinana, araka ny nampianarin'i Jesosy, hany ka mandà tsy hikambana ny tsy mpino - ary izany dia tsy azo atao afa-tsy. lazao, amin'ny zo rehetra! Voalaza ihany koa fa ireo tsy mpino tsy tonga Kristianina dia hita amin’ny ankamaroan’ny Kristianina tsy mivadika, malemy finoana, na mihatsaravelatsihy. Tsy ho voavaha ihany àry io olana io raha toa ka voan’ny hafanam-po ny Kristianina rehetra ka lasa Kristianina tena resy lahatra sy tsy manaiky lembenana izay mahay mampihatra ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny fahatanterahana eto sy ankehitriny. Ny filazantsaran’i Kristy dia handresy lahatra ny hafa ihany, satria amin’izany fomba izany no hahafantaran’izy ireo ny voninahitr’i Jesoa Kristy sy hinoan’izany. Mba hanamafisana an’io hevitra io, dia matetika no mihemotra, tsy mifanaraka amin’izany eto, ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, raha mifankatia” (Jaona 1.3,35). Avy amin’izany no anatsoahan-kevitra fa tsy mino ny hafa, tsy afaka manao izany mihitsy, raha tsy mifikitra amin’ny fitiavana araka ny tokony ho izy. Ny lalanao mankany amin’ny finoana dia miankina amin’ny halehiben’ny fifandraisantsika amin’ny fitiavana toa an’i Kristy mihitsy.
Ireo tenin’i Jesosy ireo (Jaona 13,35) tsy midika akory izany hoe hino an’izany ny hafa, fa izay manaraka an’i Jesosy ihany no hanaiky ho azy, satria maneho fitiavana toa azy izy ireo. Nasongadiny àry fa ny fifankatiavantsika dia mety hanondro ny hafa ho amin’i Kristy. Mahafinaritra izany! Iza no tsy te hanatevin-daharana an'io? Tsy hita amin’ny teniny anefa fa miankina amin’ny fifankatiavan’ny mpianany ny finoana/famonjena ny hafa. Raha ny amin’io andinin-teny io, dia diso lojika ny fanatsoahan-kevitra fa izay manaraka an’i Kristy dia tsy ampy fitiavana, ny hafa dia tsy mahafantatra azy ireo ho toy izany ary noho izany dia tsy mino azy. Raha izany no izy, dia tsy ho mahatoky kokoa noho isika Andriamanitra. Ny teny hoe “raha mivadika isika, dia hitoetra ho mahatoky Izy” (2. Timoty 2,13) dia tsy mihatra avy eo. Ireo rehetra izay tonga nino dia tonga saina fa ny Fiangonana amin’ny ankapobeny sy ny mpikambana tsirairay ao aminy dia mifanohitra sy tsy lavorary. Nitoky tamin’ny Tompony izy ireo satria tamin’izay fotoana izay dia hitany koa ny tsy fitovian’izay deraina sy izay midera Azy. Anontanio fotsiny ny finoanao dia jereo raha tsy izany. Andriamanitra dia lehibe noho ny fijoroantsika ho vavolombelona ary mahatoky kokoa noho isika. Mazava ho azy fa tsy fialan-tsiny izany ho vavolombelon’ny fitiavana lavorary an’i Kristy.
Amin'ny faran'ny fantsom-pifandraisana izay ahitantsika ny valiny amin'ny fahanginan-tena, ny sasany dia niresaka ny olana sarotra nisy teo amin'ny Fanjakan'Andriamanitra efa nisy nefa tsy mbola nahavita ny fanjakany noho ny filazany fa tsy dia betsaka ny zavatra azo atao amin'izao fotoana izao. Ho azy ireo dia ho an'ny ho avy ihany ny voninahitra. I Kristy dia nahazo fandresena tamin'ny fandehan'ny asany teto an-tany, ary Izy irery ihany no hitondra izany amin'ny fahafenoany tanteraka. Miandry ny fiverenan'i Kristy isika amin'izao fotoana izao hanantonana antsika hanohitra ny lanitra, angamba taorian'ny taona vitsivitsy nanjaka teto an-tany. Raha ny kristiana dia efa nahazo tsodrano sasany eto sy ankehitriny, toy ny famelan-keloka ny ota, ny famoronana, anisan'izany ny natiora, dia nihoatra noho ny rehetra ny sisan-javatra ara-tsosialy, kolontsaina, siantifika ary toekarena amin'ny kolikoly sy ny ratsy. Izany rehetra izany dia tsy afaka ary tsy ho voavonjy. Raha jerena ny mandrakizay dia tsy natao ho fametrahana ny tsara daholo izany rehetra izany. Ny fanamelohana ihany no azo atolotra amin'ny alàlan'ny fahatezeran'Andriamanitra ary hanafarany tanteraka. Fa ny ankamaroan'ny olona dia tokony hafahana hiala amin'ity tontolo mpanota ity mba ho voavonjy, ary ny fomba fisarahana dia nampianarina indraindray io fomba fiasa mangina io. Araka izany, tsy maintsy miala amin'ny fanirian'ny tontolo eto amin'ity tontolo ity isika ary tsy miala amin'izany. Raha ny filazan'ny mpilalao hafa milamina dia ny tsy famoizam-po sy ny tsy fahampiana eto amin'ity tontolo ity dia mitarika amin'ny fanatsoahan-kevitra fa maro ny fomba hitazona ny tenanao ho tsy manimba, satria tsy misy ifandraisany amin'ny farany izany satria ny farany dia hatolotra ny fitsarana daholo. Ho an'ny sasany, ny fomba fiasa mandry sy mangina dia midika fa amin'ny Kristiana tsara indrindra dia tokony hanome ohatra ho an'ny tenany manokana na ho an'ny fiaraha-monina, esorina tsy ho amin'ny tontolo hafa. Ny fanamafisana eto dia matetika amin'ny fitondran-tena manokana sy ny fianakaviany ary ny fiangonana. Na izany aza, ny ezaka mivantana mba hampisy hery na fanovana fiovana ivelan'ny vondrom-piarahamonina Kristiana dia ny ankamaroan'ny fiheverana ho manimba ny finoana, na dia meloka aza indraindray. Inoana fa ny fampiasa mivantana amin ’ny kolontsaina manodidina izay latsaka amin'ny tsy finoana dia hanjary hifandefitra ihany ary amin'ny tsy fahombiazana. Noho izany, ny fanoloran-tena manokana sy ny fahadiovan'ny fitondran-tena no olana lehibe indrindra.
Araka io famakiana finoana io, ny faran'ny tantara dia matetika hita fa ny faran'ny famoronana. Dia ho voasingotra io. Ny fisian'ny fotoana sy ny habaka dia tsy hisy intsony. Ny sasany, izany hoe ireo mpino, dia ho maivamaivana amin'ity fizotran-javatra ity ary hitarika ho amin'ny lavorary sy madio ary ara-panahy ny fisianana mandrakizay sy any an-danitra, ary samy maneho ny fironana izy ireo. Maromaro ny fahasamihafana sy toerana eo anelanelan'ny fiangonana. Ny ankamaroany anefa, mifindra any amin'ny toerana somary an-tsokosoko io ary mirona amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny iray. Ny toeran'ny triumphalista dia mitaky ny hiangaviana amin'ny olona manana endrika tomombana be sy “tonga lafatra”, raha toa kosa ny mpanginana no mahita ny fangatahany lehibe indrindra eo amin'ireo pessimista na "realista". Fa averiko indray, ireo dia generalisation mahatsikaiky tsy miresaka amina vondrona iray manokana izay mifanandrify amin'ny iray na iray hafa. Ireto avy ireo fironana izay miezaka amin'ny fomba iray hafa hanamora ny olana manahirana ny efa misy nefa mbola tsy hita tanteraka ny zava-misy sy ny zava-misy momba ny Fanjakan'Andriamanitra.
Safidy iray amin'ny fifandresena sy ny fahanginana
Na izany aza, misy toerany hafa izay mifanentana kokoa amin'ny fotopampianaran'ny Baiboly sy ny teôlôjia, izay tsy mandiso ny fiandohan'ny roa tonta, fa mihevitra ny fiheverana ny polarizera toy izany ho diso, satria tsy manao ny rariny izany amin'ny fiheverana tanteraka ny fanambarana ao amin'ny Baiboly. Ny fifandimbiasan'ny triumphalista sy mangingina ary koa ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpitondra ny heviny, dia milaza fa ny fahamarinana saro-pady momba ny Fanjakan'Andriamanitra dia mitaky antsika hijoro amin'ilay lohahevitra mifanditra. Na Andriamanitra manao ny zava-drehetra irery na isika no tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana. Ireo fomba fijery roa ireo dia manome fahatsapana fa tokony hampahafantatra ny tenantsika ho mpikatroka isika na tokony hanana andraikitra somary mavitrika raha toa ka tsy te-hametraka toerana eo anelanelan'ny. Ny toeran'ny Baiboly momba ny efa misy nefa mbola tsy tanteraka tanteraka dia feno ny Fanjakan'Andriamanitra. Saingy tsy misy antony mahatonga ny fihenan-tsaina rehetra. Tsy resaka fanaovana fifandanjana na fitadiavana toerana antonony eo anelanelan'ny roa tonta. Tsy misy fifanolanana eo amin'ny ankehitriny sy ny ho avy. Fa kosa, hantsoina isika hiaina ao amin'izany efa tanteraka fa tsy mbola tonga lafatra eto ary ankehitriny. Miaina ao anatin'ny fanantenana isika amin'izao fotoana izao - - araka ny hitantsika tamin'ny tapany faharoa amin'ity andian-dahatsoratra ity - dia azo lazaina amin'ny endrika ara-panoharana miaraka amin'ilay teny lova. Ankehitriny isika dia miaina miaraka amin'ny fahatokisana fa fananana ny lovantsika, na dia mbola tsy afaka miditra amin'ny voany aza isika, ary handray anjara feno indray andro any. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka amin'ity andiany ity dia handinika bebe kokoa momba izay dia midika izany fa miaina ao an-tsaina eto ankehitriny ary amin'ny fanantenana ny fahavitan'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy.
avy amin'ny Dr. Gary Deddo